गायिका आस्था राउत आफै प्रहरीसमक्ष उपस्थित भइन् - News20 Media
January 27, 2020 January 27, 2020 N20LeaveaComment on गायिका आस्था राउत आफै प्रहरीसमक्ष उपस्थित भइन्
काठमाडौं, १३ माघ । गायिका आस्था राउत प्र’हरी समक्ष उपस्थित भएकी छन् । प्रहरीको फ’रार सूचीमा रहेकी गायिका राउत सोमबार बिहान प्र’हरी समक्ष आफै उपस्थित भएकी हुन् ।
सामाजिक संजालमा प्र’हरीमाथि गाली गलौज गरेको भन्दै गायिका राउतलाई प’क्राउ गर्न अनुमति दिइएको थियो । केही दिनअघि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएकी प्र’हरी जवान रमिशा श्रेष्ठले आफुमाथि दु’र्व्यवाहार गरेको भन्दै उजुरी दिएकाे आधारमा उनलाइ फ’रार सूचीमा राखिएको थियो ।
प्रहरी जवान श्रेष्ठसँग मनमोटाव भएपछि उनले सामाजिक संजालमा संजालमा आ’क्रोश पोख्दै प्रहरीमाथि त’थानाम गा’ली गरेकी थिइन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार कानुनी प्रकृयामा आफु जान तयार रहेको भन्दै गायिका राउत सोमबार बिहान आँफै प्र’हरी समक्ष उपस्थित भएकी हुन् ।
प्रहरीले विमानस्थलमा भएको घटनाको भिडियो फुटेज पनि सार्वजनिक गरेको थियो । फुटेजमा सामान्य वि’वाद भएको देखिन्छ । घटनाको सम्बन्धमा अब सुष्मा अध्यायन गरी कारवाही अघि बढाइने प्रहरीले बताएको छ । गएको माघ १३ गते आस्थालाई प’क्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमती दिएको थियो ।
यी विदेशी स्टार जसले रविले बनाउँदै गरेको रास्कोट अस्पताललाई दिए २ करोड !
बार्सिलोनालाई पछि पार्दै रियल म्याड्रिड शीर्षस्थानमा
नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने थाह नहुने पुजा शर्माले आफ्नै कमाईले काठमाडौंमा दोस्रो घर बनाउँदै
July 10, 2020 July 10, 2020 N20
७४ वर्षका कबीर बेदीले सनी लियोनीसँग निजी मोवाइल नम्बर मागेपछि…हंगामा
February 22, 2020 February 22, 2020 N20
आफ्नी आमालाई सम्झिएर रोए रबि लामिछाने !
February 27, 2020 February 27, 2020 N20